Nooca Qormadayda Somalia
Ma u baahan tahay caawimaad qoris xirfadeed? Ka hel warqad tayo sare leh Nooca Qormadayda ugu wanaagsan Somalia ku qoran dhammaan heerarka tacliimeed.
'Sida Loo Qoro Qormadayda' waa mid ka mid ah noocyo badan oo qormooyin ah oo dadku u isticmaali karaan inay ku kasbadaan amaahda kulliyadda. Nidaamka lagu kasbanayo dhibcaha kulleejadu waa mid fudud, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad dhammaystirto 500 eray bixin oo ku saleysan howsha lafteeda. Si hawshaada 'Sida Loo Qoro Qormadayda' u istaagto, waxay u baahan tahay inuu qoro qoraa khibrad leh. Macno malahan nooca qoraaga aad tahay, ilaa inta aad leedahay xirfado qoraal oo aad u wanaagsan. Dad badan ayaa iskudaya inay qoraan qormooyin iyaga u gaar ah marar badanaana si xun bay ugu fashilmaan.
Middaas ka hor, waxaad u baahan tahay inaad iskaa u hesho nooc tayo leh oo qoraa curis ah. Waxaa jira meelo badan oo aad u jeesan karto markaad isku dayeyso inaad hesho qoraa nooc ah. Mid ka mid ah meelaha noocaas ahi waa adeeg-bixiye curis ah. Qorayaashani waxay ku takhasusaan noocyada qormada. Waxaad ubaahantahay inaad tixgaliso mid kamid ah adeeg bixiyaasha qormadan, haddii aad dhab ka tahay sida loo qoro qoraalkayga.
Markaad raadineyso adeeg bixiyaha maqaalka waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad hesho mid khibrad u leh nooca qormadaada. Hubso inaad hesho qoraa ku takhasusay nooca qormadaada. Haddii aad raadineyso qoraa garaaci kara warqad eray ah 500, ma rabi doontid inaad adeegsato qoraa curis ah oo aan weligii qorin warqad 500-eray ah. Tani waxay la mid noqon doontaa shaqaaleynta injineer u qoro naqshadaha gantaal ama shaqaale dhismo si uu u dhiso dhisme iyada oo aan khibrad u lahayn dhismaha.
Waxaa jira dhowr nooc oo qormooyin ah oo qoraa ku takhasusi karo. Si aan u xusno dhowr, halabuurku waa nooc ka mid ah qormada qoraagu ku takhasusay mowduuc gaar ah. Qof kastaa wuu ogyahay in buugaagta iyo riwaayadaha ugu fiican badankood uu qoray qoraa aan baran injineernimada. In kastoo, ay dhici karto inuu qoraagu ahaa muusikiiste karti badan, farsamooyinka qoraalka ayaa aad ugu adkaan lahaa hiddaha farshaxannimada inay fahmaan. Si kasta oo ay ahaato, nooc kasta oo qoraal gaar ah wuxuu ubaahanyahay qoraaga inuu fahmo nooca eraybixinta kujirta mowduuca.
Nooc ka mid ah qormada ayaa looga baahan yahay qoraaga inuu xoogaa aqoon u leeyahay qaab qoraalka loo adeegsaday qormada. Tusaale ahaan, si loo qoro warqad cilmi baaris ah, ardaygu wuxuu u baahan yahay inuu ugu yaraan aqoon u leeyahay qorista sayniska. In kasta oo ardaygu laga yaabo inuu khibrad u leeyahay noocyada kale ee qormada, haddana in qormadayda lagu qoro qaab noocan ah waxay u baahan tahay aqoon aad uga badan waxa uu haysto ardayga aan baran habka sayniska.
Nooc kale oo qormo ah oo ay tahay inuu ardaygu barto waa qormo dood badan leh. Qormooyinka noocan ahi waxay u baahan yihiin qoraaga inuu lahaado heer cayiman oo gorfeyn iyo caqli gal ah. Si aan qormadeyda ugu qoro habkaas oo kale, ardaygu waa inuu aqoon u leeyahay qoraalka qancinta. Qofku wuxuu noqon karaa qoraa curis wanaagsan haddii uu leeyahay xirfado dood wanaagsan.
Nooca saddexaad ee qormada ee sida joogtada ah loo adeegsado waa qormo sharraxaad leh. Qormada noocan ahi waxay u baahan tahay qoraaga inuu adeegsado qaddar cayiman oo ereyo sharraxaad ah ama sawirro u oggolaanaya qormada in si fudud loo fahmo. Qaabka wanaagsan ee loo abuuri karo noocan oo kale ah qormada ayaa ah in la qoro jirka ugu muhiimsan ee maqaalka isla markaana la isticmaalo qaar ka mid ah ereyadaada sharaxaya ama sawirradaada halkan iyo halkaas. Si kastaba ha noqotee, ardaygu wuxuu u baahan yahay inuu hubiyo inuu ogyahay ereyada loo adeegsanayo abuurista nooca qormada.
Noocyada qormooyinka aan kor ku soo taxay dhammaantood waa iska caadi. Si kastaba ha noqotee, ardaydu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan inay jiraan noocyo kale oo qormo ah oo uu qori karo ardaygu. Noocyada qormada qaarkood waxay u baahan yihiin cilmi baaris dheeri ah oo ku saabsan qeybta qoraaga. Ka dib waxaa jira noocyada noocyadeyda oo ardaygu si fudud ugu baahan yahay inuu yeesho aqoon marka ay bilaabayaan hawsha qorista. Markuu ardaygu waxoogaa aqoon ah u leeyahay noocyada qormada, waxay awoodi doonaan inay doortaan nooca qormada saxda ah ee loogu talagalay hawshooda oo macallinkoodu aqbalo.